Duufaannada, maxaa loogu magac daray? | Saadaasha Shabakadda
David melguizo | | Duufaannada
Duufaanno ku dhuftay koonfur-galbeed Mareykanka intii u dhaxeysay 1950 ilaa 2007
Maalmahan iyada oo ay jirto waxyeelada duufaanta Haiyan o Yolanda (sida looga yaqaan Filibiin) waxay ku kicin doontaa xiisaha akhristayaasha badan halka magacyadan ay ka yimaadeen, sida iyo cidda ay go'aansadaan iyo sababaha mararka qaarkood, sida kan oo kale, waxay leeyihiin in ka badan hal magac. Qaarkood xitaa waxay u maleyn karaan, maxaa diidaya in duufaantu ama duufaannada daran ee ay mararka qaarkood soo saaraan loogu magac daro sidaas oo kale loona keydiyo markii ay gaaraan duufaan ama xaalad duufaan kulaylaha ah?
Duufaannada waxay heleen magacyo kala duwan taariikhda. Kala soocistooda ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay si loo gaaro nidaamka liiska maanta ay adeegsadaan ku dhowaad dhammaan adeegyada saadaasha hawada adduunka (WMO, NHC, PAGASA, iwm).
Boqolaal sano, duufaannada waxaa loogu magac daray awliyadii maalintii ay dhacday ("San Felipe" sanadkii 1876 Puerto Rico). Dhammaadkii qarnigii XNUMXaad, khabiir ku takhasusay saadaasha hawada oo u dhashay Australia ayaa ugu magac daray siyaasiyiin aan iyagu jeclayn. duufaannada kulaylaha. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, magacyada haweenka ayaa loo aaneeyay iyaga. Intaa ka dib, Mareykanku wuxuu qorsheeyey inuu ugu dhawaaqo magac ahaan codbixin, in kasta oo soo bandhigidda alifbeetada caalamiga ah ee dhawaqda ay horseed u noqotay in lagu soo noqdo magacyada haweenka.
Kahor 1950 Adeegga Saadaasha Hawada ee Milatariga Mareykanka ayaa mas'uul ka ahaa u xilsaaridda tiro duufaanno kuleyl ah. Tusaale ahaan, duufaantii shanaad ee kulaylaha ee xilligii Duufaantii 1932 waxaa loogu magac daray Lambarka 5. Sannadaha soo socda alifbeetada dhawaaqa milatariga (Able, Baker, Charlie, iwm) ayaa loo adeegsaday magacyada.
Kadib, horaantii 1953, duufaanadii kulaylaha waxaa loo bixiyay magacyo dumar. Magacyada ku taxan xarfaha xarfaha, iyagoo siinaya duufaantii ugu horeysay ee kuleylaha sanadka magac ka bilaabma A.
1978, magacyada lab iyo dheddig labadaba waxaa lagu daray liiska magacyada duufaanka Waqooyiga Baasifigga. Sannadkii 1979-kii ayaa liiska magacyada Badaha Atlantika uu kordhay, oo ay ku jiraan sidoo kale magacyo lab iyo dhadig. Maanta, markii khalkhalka kuleylaha uu isu rogo duufaan kuleyl leh dabeylo ka badan 63 km / saacaddii (39 mph) Xarunta Duufaanta Qaranka (NHC) waxay siisaa magac.
Si loo go'aamiyo magacyada la adeegsanayo, dalalka xubnaha ka ah Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO) waxay si joogto ah dib ugu eegaan liisaska, oo ay ku jiraan magacyo caadi ah oo ku hadla Ingiriiska, Isbaanishka iyo Faransiiska. Amarka magacyada labka iyo dheddigga ayaa is beddela sannad kasta. tusaale ahaan, 1995 liiska wuxuu ku bilaabmay Allison halka 1996-dii uu ku bilaabay Arthur.
Waqtigaan la joogo, waxaa jira 6 liis oo magacyada duufaannada kulaylaha, 21 magac oo loogu magac daray duufaannada Atlantikada iyo 24 loogu talagalay duufaannada woqooyi-bari Baasifigga. Filibiin dhexdeeda waa PAGASA (Filibiin Atmospheric, Geophysical iyo Astronomical Services Administration) ilaa 2001, waxay isticmaashaa afar liis oo 25 magac ah. Magacyadu waa inay noqdaan kuwo kooban oo si fudud loo fahmi karo, waa inaan la iloobin inay saameyn ku yeelan karaan dalal badan. Liisaskan waxaa loo adeegsadaa qaab meerto sanadle ah (liiska la isticmaalay 2011 wuxuu la mid ahaa 2005, marka laga reebo magacyada laga saaray).
Xaaladda oo ah in dhammaan magacyada liistada la adeegsaday, in ka badan 21 duufaanno (24 waqooyi-bari Baasifigga), kuwa soo socda ayaa bilaabaya in loogu magac daro alifbeetada Griiga: alfa, beta, iyo wixii la mid ah. Marka laga hadlayo Filibiin, PAGASA waxay isticmaashaa liistada kaabayaasha magacyada markay ka bataan 25.
Liisaskaan, waqtiyada qaar markay duufaan waxyeello geysato oo ay dad badani u dhintaan, magaciisa ayaa la soo jeediyay in laga saaro. Tilmaantaan ixtiraamka ah ee loo fidinayo dhibbanayaasha waxay sidoo kale u adeegtaa in laga fogaado jahwareerka shirkadaha caymiska, warbaahinta, iwm. Tusaale ahaan 2005 Katrina ama Sandy sanadkii 2012 oo wata magacyo kale sida Andrew, Bob, Camille, David, Dennis, iwm.
Haddii duufaan kuleyl ah oo ka timid Atlantic ga ay gaarto badda Baasifigga, waxaa loo bixiyaa magac cusub. Marka laga hadlayo Duufaanta Haiyan, waxay ahayd laba hay'adood oo kala duwan oo siiyay labadaas magac ee kala duwan. Duufaanta Yolanda oo ah tii ay aasaaseen PAGASA.
Macluumaad dheeraad ah - Tacloban, duufaantii Haiyan dhulka eber, Duufaantii Sandy, sannad-guuradii: wax badan in la qabto, wax badan in la barto, Sanadka 2013 wuxuu noqon doonaa kii toddobaad ee ugu kululaa tan iyo markii ay diiwaanno jiraan
Tixraac - NOAA
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaannada, maxaa loogu magac daray?